Ukuthathwa kwezixhobo ze-MMS & Yeka – Izikolo eziseMason City COVID-19 Ikomkhulu
Ukuthathwa kwezixhobo ze-MMS & Isishwankathelo sokuShiya
Iqela lethu, kusetyenziswa izikhokelo ezivela kumagosa ezempilo, usebenze ukukhupha ngokukhuselekileyo imixholo yeelokhari zabafundi, bag ezo zinto, uleyibhelishe ngegama lomntwana wakho kunye nenombolo yesazisi somfundi. Le nkqubo iza kuthatha umhla we-11-15 kuMeyi. Uya kufumana ishedyuli yokulahla kunye nokukhetha ekupheleni kwale imeyile.
Xa usapho lwakho lufika ngexesha lakho elimiselweyo, ndicela ube nephepha elinegama lomntwana wakho ne ID # kubhalwe ngokubanzi, ushicilelo olungqindilili ukuze sikwazi ukutshatisa izinto zomntwana wakho kunye nemoto yakho. Emva koko, ukuba umboko wakho uyafikeleleka, ilungu leqela lethu liya kulayisha izinto kumboko wakho, ukugcina ukudideka ekuhlaleni. Akukho bafundi okanye ndwendwe ziya kuvunyelwa ukuba zingene kwesi sakhiwo nangasiphi na isizathu.
Ukuba umntwana wakho uneMason City yeZikolo zeChannelbook, umntwana wakho uya QHUBEKA iChannelbook ehlotyeni. Akukho sidingo sokubuyisela i-Chromebook kuthi.
**Ukuba iChannelbook yomntwana wakho ifuna ukulungiswa, Ungalufumana ulwazi kwi yvcqwweb.com malunga nenkxaso ye-IT.
Izinto eziza kukhutshwa
Iiyunifomu zemidlalo ye-MMS – Ukuba ubunokunikwa iyunifomu yemidlalo yasentwasahlobo, Kuya kubakho inqwelo yokulahla kufutshane nomnyango we Ibala kwindawo yokupaka ngasemva. Ungayiyeka xa usiza kulanda okanye nanini na phakathi 2 pm kunye 6 emva kwemini ngeveki kaMeyi 11 – 15th.
Iincwadi zeMMS / iithala leencwadi – Izinto ezihloliweyo kwilayibrari yethu ye-MMS, Kuya kubakho ukulahla iinqwelo ezikufutshane neelayini zokuthabatha apho ungabeka khona incwadi yakho.
Ukuba ubuyela ekhaya kwaye uqaphele ukuba unayo incwadi engxoweni yezinto ozithathileyo, ungayishiya incwadi kwiinqwelo nanini na phakathi 2 pm kunye 6 emva kwemini ngeveki kaMeyi 11 – 15th.
Igumbi lokufundela okanye utitshala – Izinto ezibolekiweyo – Ukuba ufuna ukubuyisa isixhobo osibolekileyo / osisebenzisileyo kwiklasi yakho enye, Uya kuba nakho ukuyilahla ngexesha lokufumana izinto. Qhoboshela ithegi / ilebhile enolu lwazi lulandelayo:
Igama lomfundi & Inombolo yesazisi
Isixhobo seklasi / sekhosi sisetyenzisiwe kwi
Igama likatitshala (utitshala ovela kuye into leyo(s) ubolekwe)
Izixhobo zeBhendi – Nceda ubone ulwazi kubalawuli bebhendi kwii-imeyile zabo zeveki malunga nokukhethwa kwehlobo kwezixhobo ezizezesikolo. Ukuba ufuna ukusilahla isixhobo esisesikolo owasisebenzisa ngexesha le- 2019-20 unyaka wesikolo, ungathumela i-imeyile kuMnu. Hinson ([email protected]). Uya kwenza amalungiselelo nawe ukuze agqibe idrophu.
Into ye-MMS yokuTsala / Ishedyuli yokuthabatha – UCanzibe 11-15
Ishedyuli isekelwe kwindawo yenombolo yelokhi yomntwana wakho. Ukuba umntwana wakho akayikhumbuli ukuba leliphi kanye kanye inani lakhe lokutshixa, Umntwana wakho unezinto anokuzifumana kwenye indawo kwisakhiwo (njengegumbi lokufundela), okanye unemeko exananazelayo ethintela ukuba ungafiki ngexesha lakho elimiselweyo, nceda imeyile [email protected]. Ukuba unemibuzo malunga nokuthatha amayeza kwiklinikhi yethu, nceda imeyile [email protected].
uMvulo, Ngomhla we-11 – 100 Iminyango yeWing (C-9)
2:00 – 4:00 – (100 iphiko (1000-1192) Iilokhari)
4:00 – 6:00 – (100 iphiko (1193-1385) Iilokhari)
2:00 – 6:00 – (Incwadi yeThala leeNcwadi kunye nezoBugcisa)
uLwesibini, Ngomhla we-12, 200 Iminyango yeWing (C-7)
2:00 – 4:00 – (200 iphiko (2000-2193) Iilokhari)
4:00 – 6:00 – (200 iphiko (2194-2387) Iilokhari)
uLwesithathu, Ngomhla we-13, 300 Iminyango yeWing (C-5)
2:00 – 4:00 – (300 iphiko (3000-3208) Iilokhari)
4:00 – 6:00 – (300 iphiko (3209-3417) Iilokhari)
uLwesine, Ngomhla we-14, 400 Iminyango yeWing (C-3)
2:00 – 4:00 – (400 iphiko (4000-4206) Iilokhari)
4:00 – 6:00 – (400 iphiko (4207-4413) Iilokhari & 500 iphiko (5000-5052) Iilokhari)
uLwesihlanu, Ngomhla we-15, 800 Iminyango yeWing (I-D-10)
2:00 – 4:00 – (800 iphiko (8000-8165) Iilokhari)
4:00 – 6:00 – (800 iphiko (8166-8330) Iilokhari)
Ukuba unemibuzo malunga nokuchola okanye ukushiya izinto, Nceda thumela i-imeyile uMnu. UMurzynowski, isekela nqununu ([email protected])